19 Egypt ho atemmusɛm ni:+ Hwɛ, Yehowa te omununkum+ a ɛho yɛ hare so reba Egypt. Na ne nti, Egypt anyamehunu ho bɛpopo+ na Egypt koma anan wɔ ne mu.+ 2 “Mɛma Egyptni asɔre atia Egyptni na wɔne wɔn ho ako, onua ne onua, ɔyɔnko ne ɔyɔnko, kurow ne kurow, ahenni ne ahenni.+ 3 Egypt honhom bɛbotow,+ na mɛsɛe ne tirimbɔ nyinaa.+ Na wɔbɛdan akɔ anyamehunu+ ne kaberɛkyerefo ne asumanfo ne adebisafo nkyɛn.+ 4 Na mede Egypt bɛhyɛ otirimɔdenfo bi nsa sɛ ne wura, na ɔhene a ɔyɛ den adi wɔn so,”+ asafo Yehowa, Awurade nokwafo no, asɛm ni. 5 Na po mu nsu bɛyow na asubɔnten ayow adan asase kesee.+ 6 Nsubɔnten no bɛbɔn, Egypt Nil asuasu bɛyow ayɛ asase kesee+ na demmire+ ne sibiri awuwu. 7 Asubɔnten Nil kɔn so ne Nil ano sare, ne Nil ho mfusase nyinaa bɛhyew+ ma mframa ahuw akɔ koraa. 8 Apofofo werɛ bɛhow, na wɔn a wɔtow nnarewa wɔ Asubɔnten Nil mu nyinaa bedi abooboo, na wɔn a wogu asau wɔ nsu no mu no behodwow.+ 9 Wɔn a wɔto asaawa+ ne wɔn a wɔnwene nwera nso ani bewu. 10 Ne ntamanwemfo+ bɛbotow na n’apaafo nyinaa kra adi awerɛhow. 11 Soan+ mpanyimfo nyinaa yɛ nkwaseafo. Na Farao afotufo mu anyansafo afotu yɛ nsɛnhunu nko.+ Ɛbɛyɛ dɛn na mo mu bi atumi aka akyerɛ Farao sɛ: “Anyansafo ba ne me, tete ahene ba ne me”? 12 Afei w’anyansafo no wɔ he?+ Ma wɔnka nkyerɛ wo. Sɛ wonim a ma wɔnka gyinae a asafo Yehowa asi wɔ Egypt ho nkyerɛ wo.+ 13 Soan mpanyimfo adi nkwaseasɛm,+ wɔadaadaa Nof+ mpanyimfo, na Egypt mmusua mu atitiriw+ ama ɔman no afom kwan. 14 Yehowa ahwie ahoyeraw honhom+ agu asase no so, na akannifo no ama Egypt rewɔ ntwɛtwɛdɛ wɔ ne nnwuma nyinaa mu te sɛ ɔsabofo a ɔyantam ne fe mu.+ 15 Na adwuma biara nni hɔ a eti anaa dua, duforo anaa sibiri, betumi ayɛ ama Egypt.+ 16 Saa da no Egypt bɛyɛ sɛ mmea, na ehu bɛma wɔn ho apopo,+ asafo Yehowa nsa a ɔbɛwosow wɔ wɔn so no nti.+ 17 Na Yuda asase no bɛma Egypt abɔ hu.+ Na obiara a ɔbɛte ne din no besuro esiane gyinae a asafo Yehowa asi wɔ ne ho nti.+ 18 Saa da no Egypt nkurow+ anum bɛka Kanaan kasa+ na wɔaka asafo Yehowa ntam.+ Wɔbɛfrɛ nkurow yi mu biako sɛ Ɔsɛe Kurow. 19 Ɛda no wobesi afɔremuka ama Yehowa wɔ Egypt asase no mfinimfini,+ na wɔde edum besi ne hye so ama Yehowa. 20 Na ɛbɛyɛ sɛnkyerɛnne ne adanse ama asafo Yehowa wɔ Egypt+ asase so; na sɛ wɔhyɛ wɔn so+ na wosu frɛ Yehowa a, ɔbɛsoma ogyefo kɛse bi abegye wɔn.+ 21 Yehowa bɛma Egyptfo ahu no,+ na saa da no Egyptfo behu Yehowa. Na wɔbɛbɔ afɔre de ayɛyɛde aba,+ na wɔbɛhyɛ Yehowa bɔ adi so.+ 22 Na Yehowa bɛbɔ Egypt bɔtorɔ.+ Ɔbɛbɔ no na akyiri yi wasa no yare.+ Wɔbɛsan aba Yehowa nkyɛn,+ na obetie wɔn asa wɔn yare.+ 23 Ɛda no ɔkwantempɔn+ bi befi Egypt akɔ Asiria, na Asiria bɛba Egypt na Egypt akɔ Asiria. Na Egypt ne Asiria nyinaa bɛbom asom. 24 Saa da no Israel bɛto Egypt ne Asiria so abiɛsa,+ na ɛbɛyɛ nhyira wɔ asase mfinimfini,+ 25 efisɛ asafo Yehowa ahyira wɔn+ aka sɛ: “Nhyira nka Egypt, me man; Asiria,+ me nsa ano adwuma; ne Israel, m’agyapade.”+